Apple Pencil vaovao ary Smart Keyboard Folio | Vaovao IPhone
Vao nanala ny iPad Pro vaovao tamin'ny hetsika New York i Apple Ary miaraka aminy ny periferal vaovao, mba hitrandrahana betsaka indrindra amin'izany.
Ny iPad Pro vaovao dia miaraka aminy Apple Pencil vaovao ary Smart Keyboard Folio vaovao.
Araka ny voalaza omaly, manana Apple Pencil vaovao isika ary mitondra antsika ny vaovao rehetra nandrasana. Ny endrika vaovao dia minimalist kokoa, tsy misy fonony manafina mpampitohy (satria tsy misy intsony) ary tsy misy peratra vy. Fototra fotsy tanteraka fotsiny avy eo amin'ny farany ka hatramin'ny farany.
Saingy ny endrika minimalista vaovao dia manafina be ao anatiny. Pencil Apple Vaovao miaraka amin'ny Magnetically New iPad Pro Ary amin'izany, ampy ho anao ny manomboka mamehy tsy misy tariby ary mampifandray afa-tsy amin'ny fomba iPad, Airpods. Raha tsy misy tariby na mpampifandray dia voajanahary kokoa izao ny fampiasana azy, noho izany voajanahary ka, raha ny tena izy, tsy mila manao zavatra mihoatra ny fametahana azy amin'ny iPad Pro isika raha te hankafy azy io.
Ary ny fomba fifandraisana aminy dia voajanahary kokoa. Ankehitriny ny vatan'ny Apple Pencil dia mora tohina hahafahantsika mampiasa ny kapoka, tahaka ny efa nataontsika tamin'ny Airpods, hifandraisana amin'ny iPad sy ny rindranasa. Ohatra, manokatra ny app Notes, izay azontsika atao koa ny manokatra amin'ny alàlan'ny fanoratana fotsiny ny tendron'ny Apple Pencil amin'ny iPad Pro vaovao mihidy.
ihany koa manana keyboard vaovao izahay ho an'ny iPad Pro. Ilay Smart Keyboard Folio vaovao Izy io dia manana endrika hafa, ergonomic kokoa ary misy ny fanitsiana azo atao mba hahafahantsika mametraka azy amin'ny fomba milamina kokoa rehefa mampiasa azy eo am-pofoantsika, eo ambony latabatra na aiza na aiza. Mazava ho azy, mitazona ny famolavolana fiarovana an'ny iPad izy io, tsy ho fitendry fotsiny fa ho fiarovana ho an'ny iPad Pro vaovao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » Apple Pencil vaovao ary Smart Keyboard Folio vaovao